ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ ဘာကြောင့် စီစဉ်ပေးရတာလဲ။ | Ko Rohingya
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ ဘာကြောင့် စီစဉ်ပေးရတာလဲ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ဖိတ်ကြားလွှာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါပြီ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက် ဖိတ်ကြားချက်တွေကို ပို့ရခြင်းက အကြောင်းရှိတာမို့ နည်းနည်းလေး ထပ်ပြီး ရှင်းပြခွင့်ပြုပါ။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုရာဇ၀တ်မှာ သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အချက်ကို အခိုင်အမာ သက်သေပြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ အစည်းအရုံးကနေပြီး၊ အရေးပါ၊ အရာရောက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကို Debate ရဲ့ ဖိတ်စာကို ပို့ပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖိတ်ခေါ်လည်း သူတို့ မလာဘူး၊ လက်မခံဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ဘက်က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း သိရှိထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယင်းဖိတ်စာထဲမှာ ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ စကားစစ်ထိုးပွဲ တက်ရောက်နိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ မနိုင်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
၁။ အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပါတယ်။ မထူးပါက
၂။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စာတိုက်ကနေပြီး တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး၊ ပို့ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်နှစ်ခု စလုံးမှာ မြန်မာစာပေနဲ့ပဲ ဖိတ်စာကို ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်စလုံးမှာ ထူးမလာဘူး၊ အကြောင်းပြန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်
၃။ တတိယအဆင့်မှာ အင်္ဂလိပ်စာပေနဲ့ ဖိတ်စာကို ရေးပြီး၊ ယင်းဖိတ်စာရဲ့ မိတ္တူကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သမ္မတတွေနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် အချို့၊ နိုင်ငံရေးသမား အချို့ကို ပေးပို့သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းပယ်နေကြောင်း အခိုင်အမာ သက်သေပြဖို့ပါပဲ။ အကယ်၍ မှန်ကန်တဲ့သူဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုအတွက် စကားစစ်ထိုးပွဲကို ကြိုဆိုတက်ရောက်ရပါလိမ့်မယ်။ မမှန်ကန်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုက သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းမငြင်း၊ အမှန်တရားကို လိုလားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို တစ်ကမ္ဘာလုံး သိအောင် အခိုင်အမာသက်သေတွေနဲ့ ချပြမဲ့ အစီအစဉ်ကြီးပါ။ ဒါက အားလုံး သိအောင် ကျနော်တို့ဘက်က ရိုးသားစွာနဲ့ ပွင်လင်းမြင်သာမှုအပြည့် ပြည်သူ အားလုံးကို အသိပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted on February 6, 2013, in ဆောင်းပါး, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice and tagged စကားစစ်ထိုးပွဲ, တရုတ်ကပြား, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမိုင်း, သားသတ်သမား, အစ္စလာမ်, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, ဆောင်းပါး, မြန်မာ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice, Dr Abid Bahar. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူ မရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ	အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်များ စာရင်း →